Baarlamaanka Puntland oo ka hor-yimid 13-ka kursi ee Aqalka Sare lagu kordhiyay iyo Qoondaha Haweenka – Kalfadhi
Baarlamaanka Puntland oo ka hor-yimid 13-ka kursi ee Aqalka Sare lagu kordhiyay iyo Qoondaha Haweenka
Golaha wakiilada maamulka Puntland, oo maanta shir ku yeeshay xarunta Baarlamaanka ee magaalada Garowe, ayaa mar kale ka dooday arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo 13-kii kursi ee Gobolka Banaadir laga siiyay Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Baarlamaanka ayaa sheegay in Dastuurka uusan waafaqsaneyn go’aankii Baarlamaanka ku meel-mariyay qoondada kuraasta haweenka ku fadhiyaan taas oo loogu asteeyay in haweenka keliya ay ku tar-tami karaan.
Golaha ayaa sidoo kale caddeeyay in ay sharci darro tahay ansixinta kuraasta Aqalka Sare ee matalaada Gobolka Banaadir, waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay ka hor imaaneyso Dastuurka gaar ahaan qodobka 72-aad, kaas oo sheegaya tirada xubnaha Aqalka Sare, sidoo kale waxaa uu ka hor imaanayaa qodobada, 63-aad,71-aad, 79-aad, 132-aad, 133-aad iyo 134 ee Dastuurka KMG ee dalka.
War-Saxaafadeedka ka kooban 13 qodob ayaa lagu sheegay in Puntland aysan aqbaleynin go’aanka sharci darrada ah ee kuraasta loogu kordhiyay Aqalka Sare iyadoo la marin habraaca Dastuurka.
Maxey kala yihiin labad nooc doorasho ee Guddiga Doorashooyinka ay soo bandhigeen?